चाहेअनुसारको बजेट नभएपछि विकास निर्माणमा कठिनाइ : वडाध्यक्ष न्यौपाने – Social Touch Khabar
चाहेअनुसारको बजेट नभएपछि विकास निर्माणमा कठिनाइ : वडाध्यक्ष न्यौपाने
सविन न्यौपाने हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १ का निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । २०४१ साल असार २५ गते जन्मिएका उनले २०५९ सालदेखि पत्रकारितामा विताएका थिए । उनी २०७३ सालदेखि खुल्लारूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । पत्रकारितामासमेत उनी अब्बल मानिएका थिए । २०७४ साल बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हेटौंडा– १ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित न्यौपानेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
वडा नम्वर १ लाई समृद्ध बनाउन के के योजनाहरु सफल भएर ?
सबै भन्दा पहिला हामी निर्वाचित भएर आए पश्चात् गएको डेढ वर्ष भित्रमा यस वडाका ग्रामीण भेगमा पर्ने टोल वस्तीमा पुग्नको लागि बाटोको नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यस बाहेक शैक्षिक बेरोजगारको रुपमा रहेका जनशक्तिहरुको लागि रोजगारमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, अशिक्षित बेरोजागरहरुको लागि आयमुलक सिपमुल तालिमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । शहरी क्षेत्र रहेता पनि यस वडामा ग्रामीण भेगहरु पनि छ ।
म पत्रकारिताको क्षेत्रमा प्रेस युनियनमा सक्रिय थिएँ । पार्टीको शुभचिन्तक भएको हिसाबले मलाई वडाको लागि टिकट दिईयो र जिम्मेवारी र नेतृत्वको वहन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । म वडा अध्यक्षमा उठेँ र जित्न सफल भएँ ।
शौक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा वडामा एउटामात्रै माध्यामिक विद्यालय रहेकालाई स्तरोन्नती गर्ने र बाँकी रहेका ग्रामीण भेगका आधारभूत विद्यालयहरुको लागि पनि आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको कार्य भईरहेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्दा ग्रामीण भेगमा स्वास्थय प्रदायक संस्था खोल्ने अब हाम्रो योजना छ । योजनाहरु सफल हुदै गएका छन् । अझै हामिले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
पत्रकारितामै तपाईँलाई राम्रो थियो नि, किन राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ?
पत्रकारिता गरेर पछि राजनीतिमा जान्छु भन्ने मेरो सोच हाईन तर काम गर्दै जादाँ राजनीतिमा प्रवेश गरियो । पत्रकारिता क्षेत्रमा हुदाँ पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुने ठुलो योजना थियो तर त्यो योजना सफल हुन सकेन । त्यस पश्चात म सेलाएर बसेँ । म पत्रकारिताको क्षेत्रमा प्रेस युनियनमा सक्रिय थिएँ । पार्टीको शुभचिन्तक भएको हिसाबले मलाई वडाको लागि टिकट दिईयो र जिम्मेवारी र नेतृत्वको वहन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । म वडा अध्यक्षमा उठेँ र जित्न सफल भएँ ।
वडास्तरमा पाउनु पर्ने अधिकार नपाएर धेरै गाह्रो भएको छ । खास कारण बजेटको अभाव छ , जति वडालाई बजेट चाहिने त्यो अनुसारको बजेट उपलब्ध नहुदाँ विकास निर्माणमा कठिनाई भएको छ ।
यस वडा वासीलाई घर-घरमा सिंहदरबार आएको महशुस गराउन सक्नु भएको छ त र ?
यसमा हाम्रो पहल कदमी छ । हामी स्थानीय तहका सरकार भईसकेपछि सिंहदरबार घर—घरमा भनिने जुन नारा दिएको छ त्यो एकदम राम्रो पक्ष होे । त्यसको सबैभन्दा ठूलोपाटो सिंहदरबार गाँउमा आउने हो भने हिजोको सामान्य खालको विकास निमार्णको काम वडा तहबाट हुने तर अलि ठुलो विकास बजेटको काम माग्न जानुपर्यो भने, कमिज सरुवाल टोपि लगाएर सिंहदरबारनै छिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो त्यसबाट अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा थियो ।
अब बजेटको हिसाबले ठूलो बजेटको भोल्युम स्थानीय तहको सरकारमा आउँछन् भन्ने त्यो बुझाई संघीयताको भावना र धारणा पनि हो । तर हिजो एकता राज्यात्मक प्रणाली थियो । हो त्यसको संरचना अन्तर्गत् त परिवर्तन भयो हिजो जुन कमिज सरुवाल लगाएर सिंहदरबार जाने परिपाटी थियो त्यो हालसम्म पनि अन्त्य गर्न नखोजिरहेका अवस्था अहिले पनि छ । हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा सिंहदरबारको महशुस गराउन सकेका छैनौं । । अहिले यस वडाको ग्रामीण भेगकै विकास निर्माणको कुरा गर्दा एक अर्ब बजेट लाग्ने अवस्था छ, तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकै वार्षिक बजेट करिब एक अर्ब २२ करोड जति छ । हाम्रो वडालाई वार्षिक बजेट एक करोड १५ लाख, त्यो पनि नगरस्तरीय योजना नभैकन । अनि कसरी जनतालाई महशुस गराउन सक्छौँ र?
वडामा भएका महिला तथा बेरोजगार युवाहरुको लागि के -कस्ता काम हुदैछ त ?
अहिले विशेष गरि बेरोजगार महिला र एकल महिलालाई समेत समेट्नको लागि हामीले ३ ठाँउमा नकौली लालझाडी र चौकीटोलमा सिलाई प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौ । त्यस्तै शिक्षित महिला बेरोजगारीको लागि सरकारी जागिरमा पहुँच बनाउनको लागि हामीले लोकसेवाको कक्षा पनि निःशुल्क सञ्चालन गरि रहेका छौ । लगायत अन्य थुप्रै तालिमहरु सञ्चालनमा छन् ।
धार्मिक पर्यटकीय स्थल, पाथिभरा मन्दिर पनि यसै वडामा पर्छ । वडाबाट यस मन्दिरको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
अहिले पाथिभरा मन्दिरको लागि स्थानीय समितिनै बनेको छ । त्यस समितिलेनै मन्दिरको हालसम्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ । मन्दिर जस्तो धार्मिक पवित्र स्थलमा कुनैपनि राजनीतिकरण गर्नु हुदैन् भन्ने हिसाबले समितिलाई आवश्यकता तथा सहयोगको लागि वडालेनै सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाईएको छ । समितिले हालसम्म मन्दिरको लागि पुर्ननिर्माण र भौतिक संरचना निर्माणको लािग कामहरु गरिरहेका छन् ।
तपाईले राखेका एजेन्डाहरु पारित गर्नलाई कतिको कठिनाई या सजिलो भयो ?
एजेन्डाहरु परित गर्न कठिनाई नै परेको अवस्था छ । जुन वडास्तरमा पाउनु पर्ने अधिकार नपाएर धेरै गाह्रो भएको छ । खास कारण बजेटको अभाव छ , जति वडालाई बजेट चाहिने त्यो अनुसारको बजेट उपलब्ध नहुदाँ विकास निर्माणमा कठिनाई भएको छ ।
तपाई वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले यहाँको वडा बासीलाई यस अवधिभर के दिने योजना छ ?
विशेष गरि यस वडाका बासिन्दा राप्तिखोलाबाट पिडित छन् । त्यस कारणले गर्दा चौकिटोलको सिरानदेखि जरुवा टोल हुँदै चाईनाक्वाटरको वस्तीको कटान गर्ने वर्षौँदेखिको योजना रहेको छ । त्यो समस्या पनि समाधान हुने र यो बजारको ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या छ, त्यो समस्या समेत समाधान हुने गरि वाईपासको स्तरीकरण हुनको लागि यसपालि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने चरणमा हामीले डिपीआर समेत सम्पन्न गरिसकेका छौ ।
त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आईसके पश्चात् टेण्डरमा गएर त्यसको काम सम्पन्न भयो भने, १ नम्बर वडावासीको सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ । त्यस्तै लालझाडीबाट चौकिटोलसम्म आउने पक्कीपुल बनाउने लगायत कामहरु गर्ने प्रयास भईरहेका छन् । त्यस्तै शिक्षानै विकासको मेरुदण्ड भएको कारण यहाँका बालबालिकाहरु हाम्रो ध्यानमा केन्द्रित छन् ।
मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई विस्थापित गर्न खोज्यो : अध्यक्ष दुलाल
कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि जिम्मेवार भएर लागिरहेका छौँः उपकुलपति प्रा.डा गिरी